Izincwadi ezinhle zamanje
Izincwadi ngezihloko zamanje
Insipho Namanzi, nguMarta D. Riezu
Ubunkimbinkimbi bokufuna ubungcweti kwezemfashini. Lelo zinga lobuhle elifuna ukuphakamisa uhlobo oluthile lwe-altare kunokugqama, lingabangela umphumela ophambene. Kungenzeka ukuthi ngelinye ilanga aphumele emgwaqeni enqunu njengaleyo nkosi yasendabeni, ecabanga ukuthi iyahamba...
Ukufa okukhulunywa ngabakwa-sapiens ku-Neanderthal
Kwakungeyona yonke into eyayizoba yileyo ngquza eyimpumputhe ekuphileni. Ngoba esimisweni esilawula yonke into, leso sisekelo esibonisa ubukhona bezinto kuphela ngokusekelwe enanini lazo eliphambene, ukuphila nokufa kwakha uhlaka olubalulekile phakathi kokweqisa kwawo esinyakazayo. Futhi isizathu...
Idolobha Labaphilayo, nguNicola Lagioia
Landing umakhelwane monstrosities ezingalindelekile. Odokotela bakwaJekyll okungenzeka ukuthi abakazi ukuthi banguMnu Hyde. Futhi ukuthi uma zikhona, akukhona ukuthi kube khona ukuguqulwa. Kuyoba ngenxa yaleso sisho sakudala esingenza isikhumba sakho siqine sithi “Ngingumuntu futhi akukho lutho lomuntu olungaziwa kimi”, ngoba...
Ngaphansi kokubuka kukadrako ophapheme, ngu-Mavi Doñate
Ukuba yintatheli kuqinisekisa wonke amaphuzu ekucabangeni ukuthi ungumuntu ohambile. Ngoba ukuze ulandise okwenzeka noma yikuphi emhlabeni kumele ube nalolo lwazi oluyisisekelo ukuze udlulise okwenzekayo ngokwethembeka. Umphumela ungase ube, njengalokhu, ...
Haunting Valley, ngu-Anna Wiener
Sonke besilibheke ngabomvu lelo qembu lezigelekeqe zama-hipster namanye ama-geek avela eSilicon Valley. Iqembu lezingane zikababa elimemezele uhlelo olusha lomnotho wezwe ukuze kuhlomule wonke umuntu futhi luqondiswe emphakathini wezenhlalakahle. Ukusa kwezwe elisha lobuchwepheshe nezinzuzo zalo ezikhazimulayo ...
The Stakes, nguPhilipp Blom
Lona kanye ukusetshenziswa kwegama elithi "umdlalo" kukhombisa ngokusobala umbono wezwe lethu njengento engeyona eyeqiniso ngokuphelele. Ngoba konke kungumdlalo, siyizakhamizi zesikhashana zale ndawo ngakho-ke asikwazi ukuthatha ngokungathi sína kakhulu nganoma yini. Kuphela, ngeshwa, i-etymology ye ...
Intwasahlobo i-Extremadura, kaJulio Llamazares
Kukhona ababhali okuthi okwenzeka emhlabeni kunesimo esihlukile, ubude obuhluke kakhulu kunalokho okuvelayo kanye nemibono yabo yokuvama kugcina kufinyelela kithi. UJulio Llamazares uvela kuleyo nkantolo yababalisi abagijimisa izingqondo zabo ngokoqobo lapho nje besishayisa ...
Kusuka kwiLazarillo de Tormes asitholanga incwadi engaziwa enentshisekelo enkulu kunalena. Ngoba udaba luguqulelwe esimweni somhlaba esinathi sonke nge-tie piiiiii (kungaba amaqanda noma amaqanda). Ngobhadane oludlangile kuwo wonke amazinga, amane ...